Gabriel García Márquez munguva dzeMutambo weZigaro | Zvazvino Zvinyorwa
García Márquez munguva dzeMutambo weZigaro
John Ortiz | | Vanyori, Fantasy, Type, Literature, Novela, Nyaya, dzakawanda
Gabriel García Márquez, anokunda weNobel Prize yeMabhuku.
Zvemashiripiti chokwadi chiripo mutsika dzese. Munhu anosika nemasikirwo, chimiro chake chekutanga chekutaura chaive kudhirowa, saka zvine musoro kufunga kuti agara achifungidzira nekugadzira zvisikwa zvengano zvinokura nenzira yakajairika zuva nezuva.
George RR Martin Akanyora nhevedzano yemanoveli anonakidza akapoteredzwa nemashiripiti chaiwo Hondo dzekunyepedzera dzakafanana nehondo chaidzo, mhirizhonga dzinotyisa dzakatemerwa pachiratidziri, mhuka dzinonakidza idzo munhu wese angade kuziva, kuve Mutambo weZigaro wakanyanya kubudirira. Kudivi rako, uye munguva yake, Gabriel García Márquez akanyora Makore Mazana Ekusurukirwa. Iyo inoverengeka zvakare izere nehondo dzisingaperi, zvisingaite kuuraya vanhu uye nyaya dzemhuka dzinonakidza dzisipo.
1 Kufanana pakati peMutambo weZigaro neMakore Huru Yemakore Ega
3 Chakavanzika chakawanikwa
4 Vana vemakunakuna, vana vevapombwe
5 Nezve Mutambo weZigaro
Kufanana pakati Mutambo waMatombo y Makore Mazana Ekusurukirwa
Kunyangwe isingakwanise kuvimbiswa kuti RR Martin akaverenga Gabriel García Márquez, kufanana kwakawanda pakati penyaya mbiri idzi kunoita sekuratidza kuti zvinogoneka.
Zviripachena zvinhu senge makunakuna, kutenderera kwemhuri, zvakavanzika nezvekwakabva mavara, mashiripiti ezhizha uye nhamo yechando, varipo mune zvese. Nekudaro, kune zvimwe zvinongedzo zvisingaonekwe zvakanyanya neziso rakashama, uye izvo zvinonakidza kuongorora mukati.
Incest senge dingindira rinowanikwa mune ese ari maviri mabasa. Nepo Martin achiitora ichienda kumberi nehukama pakati pemapatya, Márquez anouya padhuze neiyi kesi neiko inoratidzirwa murudo pakati paRebeca nemukoma wake wekurera José Arcadio Zuva rakanaka. Nekudaro, mune ese ari maviri mamiriro vari kupisa, kwakanyanya, kwakadzika, kupenga rudo.
Vaviri Cersei, mukati Mutambo weChigaros, saRebeca, mukati Makore zana okusurukirwa, vanorasikirwa nepfungwa dzavo nekuda kwerudo rwakarambidzwa rwehama dzavoVaviri vanogara mukutapwa, kunyangwe nenzira dzakasiyana. Chekutanga, nekusagona kurarama zvakasununguka rudo rwake; wechipiri, paakadzingwa kubva kumhuri yeBuendía yekuroora uye kuzvipira pakumuda kwake.
Humwe hukama hwehukama hunodzokororwa zvese mune imwe novel uye imwe, ndiyo iyo iyo zvinoitikawo pakati paamaiguru nemuzukuru. Pakutanga kwe Makore Mazana Ekusurukirwa, Amaranta anotsvaga nyaradzo mumawoko emunun'una anopfuura mumwe chete, kunyangwe iye asingapedze hukama uhwu, anozvimaka zvese kweupenyu hwese.
Asi Ukama hwaAureliano Babilonia nainini vake Amaranta Úrsula, uye kuti inokura sei, yakafanana zvakanyanya ne the Daenerys Targaryen nemuzukuru wake Aegon Targaryen, anonyatso kuzivikanwa saJon Snow.
Makore Mazana Ekusurukirwa, hunyanzvi hwaGabriel García Márquez.
Jon Snow naAureliano Babilonia vane zvakawanda zvakafanana pane rudo rweukama kune vatete vavo. Vaviri vakanyeperwa nezvekwavakabva, kuvanyima chokwadi chekwavakabva.
Aureliano Babilonia haana kumbotsanangurwa kuti vabereki vake chaivo ndivanaani. Anokura achitenda kuti iye ndiBuendía, mwanakomana waFernanda Del Carpio naAureliano Segundo Buendía, asi pakupera kwemutambo anoona kuti ndiye muzukuru wavo chaiye, sezvo amai vake vaive Renata Remedios nababa vake Mauricio Babilonia.
Jon Snow anonyeperwa, achimuudza kuti ndiye mwanakomana waEddard Stark ane hure anonzi Wylla. Zvekare, mune yekupedzisira nhanho yezvikamu, Jon anoona ari mwanakomana waLyanna Stark - Hanzvadzi yaEddard - naRhaegar Targaryen, saka zita rake chairo ndiAegon Targaryen.
Vana vemakunakuna, vana vevapombwe
Varwi varume vane aura yesimba vanodiridza mbeu yavo zvisingarwadzi. Robert Baratheon, mambo anotanga nhevedzano, ane vana vehupombwe kwese Kumhara kwaMambo.
Colonel Aureliano Buendía aive nemabastard gumi nemanomwe, iyo yaakabereka munguva yehondo makumi matatu nembiri dzaakatungamira nekukundwa. Mune mbiri nyaya, mabastard anourawa, achisara chete akapona. Vhura Makore Mazana Ekusurukirwa, pakupedzisira, izvi zvinofa zvakaurayiwa. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chichaitika kuna Gendry, asi hazvingashamisi kuti zvakafanana zviitike.
Cersei naJaime Lannister vanokwanisa kuve nevana vane hutano, kunyange hazvo vachizivikanwa nehama dzemurume. Kupenga, hutsinye uye kushaya simba zvinoratidza vana vevaviri ava, sekumaka kwavanoita vana vaJosé Arcadio Buendía na Úrsula Iguarán.
Wokupedzisira Aurelian, mwanakomana waAureliano Babilonia naAmaranta Úrsula, akazvarwa aine muswe wenguruve unotyisa uye unodyiwa nemasvosve. Pakati pedzidziso dzakakurumbira nezvaJon naDaenerys, mumwe wemwanakomana wavo aive hafu yedhiragi akamira. Zvekare, mucherechedzo wemakunakuna pamuswe.
Nezve Mutambo weZigaro
Yakanyorwa muna 1996 naGeorge RR Martin, Mutambo waMatombo (Mutambo wechigaro cheushe), ndiyo yekutanga runyorwa munhevedzano inonzi Rwiyo rwechando nemoto. Kunda iyo Locus Mubairo weYakanakisa Yekufungidzira Novel muna 1996, uye muna 2003 iyo Ignotus Mubairo weYakanakisa Kunze Novel.
Muna 1996 Martin akahwina mubairo weHugo we Best Best Novel neRopa reShato. Ye2011 nhepfenyuro yeterevhizheni Game of Thrones yakatanga paHBO, inopera gore rino 2019. Mukutaura, iwo akateedzana aive neRR Martin sechikamu chevanyori, zvisinei, mumwaka wekupedzisira akange asipo.
George RR Martin, musiki we Game of Thrones.
Gabriel García Márquez naGeorge RR Martin ndivo vabereki vechokwadi chemashiripiti, munzvimbo dzakasiyana uye panguva dzakasiyana. Kufanana kwakawanda zvekuti zvakaoma kuzviisa mutsamba shoma, asi zvinonakidza uye zvinonakidza kuzviwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » García Márquez munguva dzeMutambo weZigaro
Bhabhironi ??? !!!!